ဆီးချိုရှိရင် ဆူရှီစားလို့ရလား - Hello Sayarwon
ဆူရှီ လူတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်နော်။ ဂျပန် အစားအစာတစ်မျိုးပေါ့။နောက်တစ်ခု လူတော်တော်များများလက်ခံထားတာက ဆူရှီစားရင်ကျန်းမာတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဒီအချက်က လူတိုင်းမှာအကျုံးဝင်ရဲ့လား။ ဆူရှီစား ကျန်းမာတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုက ဆီးချိုရောဂါရှိနေသူမှာတော့ အကျုံးမဝင်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးပါရစေနာ်။
ဆူရှီက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
အများစုလက်ခံထားတာက ဆူရှီကရေညှိ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်ငါးတွေ၊ ပင်လယ်စာတွေက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာပါ။ တကယ်လည်းကောင်းတာပါ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေက ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေထဲမှာ အသက်ရှည်တဲ့ လူမျိုးစုတွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာ အမှန်ပါ။
ဆူရှီစားဖူးတယ်ဟုတ်။ ဆူရှီမှာ ဆန်စေးစေးလေးကို အရသာဝင်အောင်နယ်ထားပြီးရေညှိလေးနဲ့ပတ်ထားပါတယ်။ အပေါ်ကနေတော့ ဆယ်လ်မွန်အသားလွှာ၊ တူနာ နဲ့ မက်ကာရယ်ငါးတွေကိုတင်ထားပါတယ်။ ဆူရှီလှလှလေးတွေကို ဝါဆာဘီ အနှစ်ရယ်၊ ပဲငံပြာရည်ရယ်၊ အချဉ်စိမ်ထားတဲ့ ချင်း အလွှာလေးတွေနဲ့စားရတာပါ။ မရောနိစ်နဲ့ တွဲဖက်စားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ခြုံပြီးကြည့်လိုက်ရင် ဆူရှီမှာပါတဲ့ အမယ်တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့တော်တော်လေးညီညွတ်တာပါ။
ဆီးချိုရှိတယ်။ ဆူရှီလည်းစားချင်တယ်။ တည့်ပါ့မလားလို့တွေးနေသူတွေကို မစားဖို့ပြောပါရစေနော်။ ဆူရှီက ကျန်းမာရေးအတွက် ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ဆူရှိလုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ဆန်ကစေးကပ်မှုများတာကြောင့်သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆူရှီမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုကလည်းတော်တော်လေးများပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အရမ်းများတဲ့ စားစရာတွေက ဆီးချိုသမားတွေအတွက်လုံးဝမသင့်တော်ဘူးဆိုတာကတော့ အထွေအထူးပြောနေဖို့ မလိုအောင် သိထားပြီးဖြစ်မှာပါ။
ဆူရှီတစ်ပွဲစာမှာ ကယ်လ်လိုရီ ၂၀၀ ကနေ ၅၀၀ အထိပါဝင်နေပါတယ်။ တစ်ပွဲစာမှာပါတဲ့ ဆူရှီ အရေအတွက်နဲ့ အရွယ်အစားကိုလိုက်ပြီးတော့ ကယ်လ်လိုရီ ကွာခြားချက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်နေတဲ့ ဆူရှီတွေမှာက ဆား၊ သကြား၊ ဗီနီကာ၊ ပဲငံပြာရည်တွေအပြင် ဆန်စေးစေးတို့မျာပါတဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကြောင့် ဆီးချိုရှိသူတွေစားသုံးဖို့က တကယ့်ကို မသင့်တော်ပါဘူးနော်။ ဒါတွေအပြင်ဆူရှီဆိုင်သွားထိုင်တဲ့အခါ ဆီးချိုသမားတွေအနေနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား နဲ့ တန်ပူရာတို့ကိုလည်း မစားသင့်ပါဘူး။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ရော အဆီရောပါဝင်မှုများနေတာကြောင့်ပါနော်။ ပဲငံပြာရည်ထဲကို အကြိုက်နှစ်ပြီးစားတာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။
ဆီးချိုသမားတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဆူရှီကို ဒီလိုဖန်တီးပါ
ဆီးချိုရှိပေမယ့် ဆူရှီလည်း ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုမျိုးလေး လုပ်စားကြည့်ဖို့ပြောပါရစေနော်။
ဆန် -စေးကပ်တဲ့ ဆန် အစား ပုံမှန်စားနေကျ ဆန်ကိုပဲချက်ပေးပါ။ ဒါမှ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုနည်းမှာပါ။ ဆန်ချောမဖြစ်လေကောင်းလေပါနော်။
ငါး နဲ့ ပင်လယ်စာတွေ – ဆူရှီရဲ့ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ရေဘဝဲ၊ ပုဇွန်၊ ငါး နဲ့ အခြားသောပင်လယ်စာတွေကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အရမ်းငန်တာနဲ့ အဆီများတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့တော့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ကျက်နေအောင်ပြုပြီးမှ စားပေးဖို့လည်းပြောပါရစေနော်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကာကွယ်တဲ့သဘောပါ။ သခွားသီး၊ဆလတ်ရွက်တို့လိုမျိုး အသီးအနှံတွေကိုလည်း ထည့်စားပေးပါ။
ဆော့စ် -ဆော့စ်ကိုလည်း အချိုကဲ၊ အငန်ကဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စားလို့အဆင်ပြေမယ့် အနေအထားတစ်ရပ်လောက်ပဲပြင်ဆင်ပေးပါ။ အချိုကဲ၊ အငန်ကဲတဲ့ဆော့စ်တွေက ဆီးချိုသမားတွေအတွက် အန္တရာယ်ပါပဲ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ အများလက်ခံထားတဲ့ ဆူရှီကို ဆီးချိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ မစားပါနဲ့လို့ပြောပါရစေနော်။
Can I Eat Sushi If I Have Diabetes? https://www.ontrackdiabetes.com/live-well/eat-well/can-i-eat-sushi-if-i-have-diabetes Accessed Date 28 March 2019
Is It Okay to Eat Sushi if You Are Diabetic? https://www.sushi.com/articles/is-it-okay-to-eat-sushi-if-you-are-diabetic Accessed Date 28 March 2019
Eating Sushi with Diabetes https://www.diabetesdaily.com/guides/eating-sushi-with-diabetes/ Accesssed Date 28 March 2019